Wararka - Warshadaha casriga ah, tiknoolajiyadda microporous biraha iyo wax soo saarka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhinacyo badan
In warshadaha casriga ah, technology microporous biraha iyo wax soo saarka waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in beeraha kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah, alaabada dharka (dharka iyo dharka guryaha) iyo alaabada ilaalinta caafimaadka ayaa leh qayb weyn. Laga soo bilaabo alaabta ceeriin ah (walxaha kiimikada ah) illaa badeecada la dhammeeyay, walxaha cayriin waa inay maraan dhowr geeddi-socod, sida wareejin, tolid, dheeh, tolid, iwm. ilaa fiilooyinka kiimikada, sidaas darteed tiknoolijiyada miskaha ayaa la sameeyay.
Spinneret sidoo kale waxaa loo yaqaan 'spinnerette'. waa nooc ka mid ah godad badan oo yaryar oo ku yaal suuliga sida mashiinka birta ee loo isticmaalo wareegga kiimikada kiimikada. Waxyaabaha la dhalaalayo ama kiimikada lagu kala dirayo, ka dib ayaa laga riixayaa godadka si loo sameeyo fiilo, oo lagu adkeeyo uumiga, uumi baxa ama qaboojinta. Spinnerets badanaa waxaa laga sameeyaa bir bir ah, laakiin soosaarka rayon wuxuu u baahan yahay platinum. Cabbirka iyo qaabka godadka miiqyada ayaa go'aamiya qaabka qaybta hoose ee fiilada. Dalool kastaa wuxuu sameeyaa hal feyl oo keliya, fiilooyinka laysku darayna waxay sameeyaan dunta dunta.
Iyadoo la horumarinayo shakhsiga-19 ee adduunka, iyo sidoo kale dillaaca Maraykanka iyo Yurub, alaabooyinka ilaalinta ee leh tiknoolajiyada asaasiga ah ee dharka aan la saarin (dharka miiqan / dharka dhalaalaya dhalaalaya) ayaa soo jiitay indhaha adduunka markale. Laga soo bilaabo khalkhalka marxaladda hore ee cudurka ilaa shuruudaha tayada cusub, shirkadeena ayaa horumarisaydhalaalay afuufay miiqyo & miiqday dunmiiqa spinneret & spinneret dhinto madax & line-soo-saarka dhar non-tolmo wanaagsan si loo daboolo baahida suuqa, isla markaana looga helo jawaab celin wanaagsan suuqa.
Intaa waxaa sii dheer, shirkadeena sidoo kale waxay leedahay qayb weyn oo suuq ah oo loo yaqaan 'spinnerets' oo loo isticmaalo dhar dhaqameed, sida noocyo kala duwan oo isku dhafan (nooca jasiiradda-badda / sbukaan-socodka nooca / kala-gooyo nooca), waxaana loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya.
Filterka dhalaalaya ee Pp, Waxyaabaha Maqaarka ah ee Aan Xidhnayn, Dharka Aan Xidhnayn, Khadka Waxsoosaarka Maqaarka ee Aan Ku Xidhnayn, Habka Wax Soosaarka ee Dharka Aan Xidhnayn, Sifeeyaha Filimka Pp, Dhammaan Alaabooyinka